Ungazi njani ukuba uneGloot yegazi | Iimpawu kunye neempawu zoKhuseleko lwegazi
Yindlela onokwazi ngayo ukuba une-gazi
04 / 05 / 2017 /0 Amazwana/i Isifo sentliziyo kunye nesihlunu, Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Isinxibo segazi sinokufa. Ingxaki kukuba ayisoloko ivelisa iimpawu ezicacileyo kude kube kudala. Funda oku ukuze ufunde ngakumbi malunga neempawu zokuqala kunye neempawu zokubetha kwegazi kwithambo, ingalo, intliziyo, isisu, ingqondo okanye amaphaphu.
Ayisiyongozisi ide ikhululeke- emva koko inokubulala!
Isinxibo segazi esingakhululwanga siyingozi
Kodwa ukuba iqabunga legazi liyakhulula kwaye lihamba ngemithambo lisiya entliziyweni nasemiphungeni- linokuba neziphumo ezibulalayo
Uninzi lwamahlwili egazi afunyanwa emilenzeni - kodwa kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba oku kuxela okuthile malunga nokuba umthambo kunye nemeko yakho yemithambo
Ihlwili legazi kukuqokelelwa kwegazi eliguqukileyo ukusuka kwimeko yalo efana nolwelo ukuya kwinto efana ne-gel efana ne-denser. Xa i-clot yegazi ifika kwimithambo yakho, ayizukuhlala inyamalala iyodwa-kuxa iimeko ezisongela ubomi zinokuvela.
Ubunzulu be-vein thrombosis (DVT) ligama xa ipulaki yenziwa kwenye yamalungu omzimba aphambili. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba le yenzeka kwelinye lamathambo, kodwa iyakwazi ukwakheka ezingalweni, kwimiphunga okanye kwingqondo.
Ihlwili legazi alinabungozi de liphume. Kodwa ukuba yahlukile kwindlela yemithambo kwaye ihamba ngemithambo iye entliziyweni, kwingqondo okanye emiphungeni inokuluthintela lonke unikezelo lwegazi-oku kunokubonelela ngesiseko sokuhlaselwa sisifo sentliziyo okanye ukubetha.
1. Igazi elijiyileyo emlenzeni okanye engalweni
Esona siza siqhelekileyo esichaphazeleka kukungxenga kwegazi yinkonyane. Isinxibo segazi emlenzeni okanye engalweni sinokuba neempawu ezahlukileyo, kubandakanya:
Ukutshintsha umbala (umz.
Kufuneka uthathe ikhefu njengoko uhamba
Iimpawu ziya kwahluka ngokuxhomekeka kubungakanani begazi- yiyo loo nto unganazo kwaphela iimpawu kwaye ube unegazi elincinci. Ngamanye amaxesha kunokubakho ukudumba okuncinci emlenzeni ngeentlungu ezincinci. Ukuba i-clot yegazi inkulu, wonke umlenze unokudumba kwaye oku kunokubangela iintlungu.
Akuqhelekanga ukuba ne-clots yegazi kwimilenze yomibini okanye kwiingalo-amathuba amaninzi ukuba unegazi xa iimpawu zibekwe emlenzeni okanye kwingalo.
2. Igazi elijiyileyo entliziyweni
Ukuba nehlwili legazi entliziyweni kungakhokelela kwintlungu esifubeni kunye nemvakalelo yokuba kukho uxinzelelo apho. Ukuziva 'ukhaphukhaphu' kunye nokuphefumla okufutshane kunokuba zimpawu zegazi eligutyungelweyo entliziyweni.
3. Igazi elixineneyo esiswini / esiswini
Ubuhlungu obungapheliyo kunye nokudumba kunokuba ziimpawu zokugcwala kwegazi naphina esiswini. Nangona kunjalo, ezi zinokuba ziimpawu zetyhefu yokutya kunye nentsholongwane yesisu.
4. Igazi elixineneyo kwingqondo
Isinxibo segazi kwingqondo sinokubangela iintloko ngesiquphe kwaye zinganyamezeleki, zihlala zidibene nazo ezinye iimpawu zokubetha kwe-ischemic, njengobunzima bokuthetha nokuphazamiseka okubonakalayo.
5. Ukuxinana kwegazi emiphungeni
Ingubo yegazi ekhulula kwaye inamathele kwimiphunga ibizwa ngokuba yi-pulmonary embolism. Iimpawu zale meko zezi:
Ukuphefumla ngequbuliso okubangelwa kukuzilolonga
Ukunxibelelana nodokotela wakho
Ukuba ufumana iimpawu ezinokuba zezam igazi, nxibelelana noGP wakho okanye omnye ugqirha kwangoko. Nxibelelana nophando, njengoko-njengoko kukhankanyiwe -igazi eligungxule igazi linokuba neziphumo ezibulalayo. Uyacetyiswa ukuba unxibe iikawusi zoxinzelelo rhoqo. wolule ithanga kunye nezihlunu zethole, kunye nokusebenzisa iroli yegwebu- njengoko oku kungabandakanyeka ekuphuculeni ukujikeleza kwegazi lakho. Apha ngezantsi ubona iindlela ezi-5 zokuzilolonga zegwebu ezinokukunceda ukhulule amathanga aqinileyo kunye nezihlunu zethole:
I-VIDEO: Ukuqengqeleka kwamagwebu oku-5 ngokuchasene neeBoni ezimbi kunye namaLegs
Yiba yinxalenye yosapho lwethu!
Zive ukhululekile ukubhalisela kwisitayile sakho se-YouTube simahla apha (cofa apha). Apho uya kufumana inani leenkqubo ezilungileyo zokuzivocavoca kunye nevidiyo yesayensi yezempilo enokukunceda ukuphucula impilo yakho.
Ngendlela, ubusazi ukuba uphando lwakutshanje lufumene indlela yokunyibilikisa nokwenzakalisa igazi? Kwaye ukuba kunokuba ngaphezulu kwamaxesha angama-4000 ngokusebenza ngakumbi kunyango lwangoku? Ngapha koko ayihlawulwanga ku (!) Ungafunda ngakumbi malunga noku kwiphepha elilandelayo. Sicebisa ukuba ulifundele inqaku "Ungasibona njani istrowuku".
IPHEPHA ELANDELAYO: Isifundo: Olu nyango lunokuYichitha iGazi le-4000x Ngokunempumelelo!
-Zive ukhululekile ukulandela uVondt.net apha ITUBE
-Zive ukhululekile ukulandela uVondt.net apha FACEBOOK
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/blodpropp-i-leggen-redigert.jpg?media=1648573622 356 650 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2017-05-04 18:36:122020-05-03 13:28:01Yindlela onokwazi ngayo ukuba une-gazi
Ubuhlungu obungapheliyo emzimbeni kunye neSpenosis esemgangathweni Ndingaqala nini ukwenza umthambo emva koqhaqho?